फेसबुकमार्फत बढी भ्युअर तथा लाइक पाउन र सोही आधारमा पैसा कमाउन अचेल गलत तस्वीर प्रयोग गर्नेहरू बढेका छन् । कतिपयले कुनै अमुक केटीको तस्वीरसहित फेक आइडी बनाएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने गर्छन् । यस्तोमा सञ्चारकर्मीसमेत झुक्किएर साथी बन्छन् र त्यस्ता फेक पोस्ट शेयर गर्दा उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश...
रोबोटले गर्छ प्रतिघण्टा २ सय मोबाइल डिसेम्बल
पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा बढिरको विभिन्न किसिमको आविष्कारको कारण विभिन्न किसिमका डिभाइस आउने क्रम पनि उच्च छ, जसको कारण विश्वकर विद्युतीय फोहोर अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ मा विश्वभर ४ करोड ४७ लाख मेट्रिक टन विद्युतीय फोहोर जम्मा भएको थियो । यसबाट २...
सजिलो पासवर्डले साइबर आक्रमण
काठमाडौं । आफ्नो बिर्सिने बानी व्यवस्थित गर्नुको सट्टा सजिलो पासवर्ड प्रयोग गर्दा अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ता साइबर आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । धेरैजसो मानिस सजिलो पासवर्डकै कारण समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन् । यस्तो सजिलो पासवर्डका कारण साइबर आक्रमणको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ । पछिल्लो समय एक अ...
१० सर्वाधिक विक्री भएका स्मार्टफोन
विश्वभर स्मार्टफोनको व्यापार उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेको छ । विश्व स्मार्टफोनको बजारमा विशेषगरी सामसुङ, एप्पल र हुवावेईका स्मार्टफोनको व्यापार सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ । यस्तोमा गत साता सबैभन्दा बढी विक्री भएका स्मार्टफोन यस्ता छन: सामसुङ ग्यालेक्सी ए८० यो स्मार्टफोनमा ८ जीबी ¥याम र १२८ जीबी इन्...
ओपो एफ ११ प्रो : सेल्फी एक्स्पर्टबाट ब्रिलियन्ट पोर्ट्रेटतिर
ओपो एफ११ प्रो कम प्रकाश भएका स्थानमा समेत उत्कृष्ट तस्वीर खिच्ने क्षमतालगायत अन्य नवप्रवर्तनात्मक प्रविधियुक्त मोबाइल फोन हो । ओपो नेपालका पीआर म्यानेजर सुरज महर्जनका अनुसार एफ११ प्रोमा ४८ एमपी अल्ट्रा–क्लियर क्यामेरा प्रणाली, राइजिङ क्यामेरा, पानोरामिक स्क्रिन उपलब्ध छन् । ओपोले पहिलोपटक स्मार्टफोन...
चन्द्रमाको ‘डार्क साइड’मा आखिर के छ ?
हामीहरू चन्द्रमा हेर्दा सधैं एकै भाग मात्र देख्ने गर्छौं, अर्थात् पृथ्वीबाट चन्द्रमाको आधा एउटै भाग मात्र देखिन्छ । चन्द्रमाको नदेखिने आधा भागको विषयमा भने धेरै जानकारी पाउन सकिएको छैन । यहाँ चन्द्रमाको तिनै भागबारै संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ : सन् १९५९ मा सोभियत विमान लुना ३ लाई नदेखिने भागको तस्वीर...
अब भारत र चीनमा पनि एनटीसीको सिम चल्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा सोमवारदेखि प्रिपेड अन्तरराष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसकोे शुरुआत भारत र चीनबाट हुने नेपाल टेलिकमले उल्लेख गरेको छ । अब नेपाल टेलिकमका जीएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता चीन वा भारत गएका बेला आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा फोन गर्न, नेपालबाट आएक...
क्लासिक टेकको सस्तो इन्टरनेट सेवा
काठमाडौं (अस) । क्लासिक टेकले ४० एमबीपीएस ब्यान्डविथको इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा कम मूल्यमा ल्याएको छ । बुलेट–जी प्लानअन्तर्गत प्रतिमहीना ६९२ रुपैयाँमा यो सेवा लिन सकिने कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि यो दरमा वार्षिक ग्राहकलाई मात्र सेवा उपलब्ध हुनेछ । नेपालमै यति धेरै ब्यान्डविथ यति कम मूल्यमा उपलब्ध गराइ...
मोबाइलको कुलत पत्ता लगाउने एप
काठमाडौं (अस) । ५ वर्षदेखि प्रत्यक्ष भेटघाट नभएका साथीहरू अचेल मोबाइलमा रहेका विभिन्न एप खासगरी सामाजिक सञ्जालबाट नजीकिएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । अर्कोतर्फ बालबालिकाहरू मोबाइलको लतमा लागेर पढाइ बिगारिरहेका छन् । विगतमा आमाबुबाले छोराछोरीलाई बाहिर जान गाली गर्थे भने अचेल बाहिर डुलेर आऊ कति मोबाइलम...
सम्भव होला कपडाबाटै मोबाइल चार्ज ?
काठमाडौं (अस) । आफूले लगाएको कपडाले नै मोबाइल चार्ज गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने तयारीमा वैज्ञानिकहरू लागिपरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकका अनुसार शरीरमा लगाउने कपडामा राखिने सोलार प्यानलका माध्यमबाट स्मार्टफोन मात्र होइन, जीपीएस तथा ट्याब्लेट समेत चार्ज गर्न सकिन्छ । सोलार ड्रेसेज फोटो...